Khadka tooska ah Roulette | Talooyin & Xeelado | Voordeelcasino.com
Bogga ugu weyn » Ciyaaraha casino ee bilaashka ah » Roulette
Online roulette waa ciyaar casino ah oo u fudud qof walba inuu ciyaaro. Xitaa haddii aadan waligaa ciyaarin kulankaan miiska, si dhakhso leh ayaad kubilaabi kartaa. Asal ahaan, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ogaato waxa xulashooyinka sharadka ah ay jiraan oo xitaa uma baahnid inaad dhammaantoodba taqaanno bilowga si aad u ciyaarto ciyaarta miiska. Markaad internetka ku jirto roulette waxaad leedahay faa'iidada inaad adigu tahay qofka go'aamiya xawaaraha ciyaarta, maxaa yeelay ma jiro croupier xaadir ah oo tilmaamaya goorta ingewaa la dhigi karaa iyo marka kale. Marka waxaad leedahay sidii laylis roulette Ciyaaryahan markasta, tusaale ahaan, u fiirso natiijooyinka wareegyadii hore oo soo ogow khamaarka kuugu fiican adiga.
Khamaarka khadka tooska ah roulette miiska
Waxaad ka iibsan kartaa a roulette xulo miis aad ku ciyaarto. Badanaa dhowr nooc ayaa la bixiyaa, si aad u awoodo, tusaale ahaan, Faransiis ama Mareykan roulette ciyaari karo. Farqiga ayaa ah in nooca Faransiiska uu leeyahay hal sanduuq oo eber ku leh midabka cagaaran midka Mareykankana wuxuu leeyahay laba sanduuq oo cagaaran, mid leh eber kan kalena laba eber. Ka dib markii aad kulan ka ciyaarto khadka tooska ah roulette waxaad arki doontaa a roulettewheel iyo waxa roulette berrinka, kaas oo aad ku dhejin karto sharad.
Waxaad markaa bilaabi kartaa inaad isla markiiba ciyaartid adoo ku dhejinaya jajab aad dooratay ikhtiyaariyada qamaarka. Sharadka ugu fudud ayaa ku sharadkaya madow ama casaan, maxaa yeelay taasi waxay bixisaa fursadda ugu sarreysa ee lagu guuleysto, laakiin macaashku wuu ka xaddidan yahay marka aad lacagta sharad ku dhigto lambar gaar ah. Ikhtiyaar kasta oo sharad ayaa ku og internetka roulette taas oo ah lacag bixin kale oo ay noqon karto fikrad in lagu faafiyo sharad roulette berrinka Ciyaaryahan ahaan, markaa adiga ayaa gacanta ku haya marka ay kubaddu bilaabaneyso inay door ciyaarto, maxaa yeelay waxaad riixaysaa batoonka bilowga.
Xawaaraha, xiisaha iyo macaashka
Roulette ayaa ku jira casino online ciyaar aad u caan ah oo loo yaqaan 'casino' oo isku daraysa xawaaraha xamaasada iyo guulaha waaweyn. Waa isku dhafkan taas oo ka dhigaysa mid aad u soo jiidasho leh ciyaartoy badan iyo waliba sidoo kale inaad adigu ciyaarto ciyaarta casino ee caadiga ah. Caadi ahaan, kala duwanaanshaha xulashooyinka sharadka ayaa sidoo kale gacan ka geysta soo jiidashada ciyaarta iyo caannimadiisa. Faa'iidada ku ciyaarista khadka tooska ah roulette waxaa intaa dheer in aad taas ku sameyso khamaarka khadka tooska ah ee internetka si qarsoodi ah baswaxay sameyn kartaa iyadoo dad kale aysan daawan go'aanka la gaarayoingen wuxuu ku geynayaa miiska ciyaarta. Taasi waxay ku siinaysaa inaad tahay laylis roulette ciyaaryahan hubaal dareen fiican, maxaa yeelay, ninna on your vingers fiiriyey.
Ciyaaraya roulette in casino toos ah waxay bixisaa ikhtiyaarro loogu talagalay ciyaartoyga leh lacag yar oo ciyaar iyo sidoo kale ciyaartoy miisaaniyad badan leh. The roulettemiisasku waxay leeyihiin xaddidaadyo sharad cayiman oo leh uguyar iyo ugu badnaan sharad. Waad awoodaa markaa roulette ciyaar khamaarka tooska ah ee loogu talagalay 0,10 euro markiiba, laakiin sidoo kale khamaaris badan, sida 5.000 euro. Ma jeceshahay inaad internetka gasho? roulette la isku dayo? Tani waa bilaash, laakiin waxaad sidoo kale iska qori kartaa qamaarka aad dooratay inaad lacag ugu ciyaarto.
De roulette xeerarku asal ahaan waa wax fudud. Waxa kaliya ee haray ingewaa ka dhib badan yihiin fursadaha sharad badan. Sababtoo ah waa wax walba oo ku saabsan roulette giraangiraha leh qaybo ka kooban 0 ilaa 36 iyo kubbadda. Waad saadaalinaysaa adigoo saaraya sharad barta labajibbaaran ee kubaddu ku dhammaatoigt. Croupier wuxuu kubada dhigayaa ciyaarta iyo roulette giraangiraha leexo. Waa roulette kubbadu si otomaatig ah ayey ugu soo dagi doontaa laba jibbaaran oo haddii ay halkaas sii joogto, tirada square-kaasi waa nambarka guuleysta Sharadka waxaa lagu sameeyaa qaab jajab ah.
Chips-yada waxay yeelan karaan qiimeyo kala duwan. Waa sida ku xusan roulette xeerarka loo ogol yahay in la dhigo sharadyo badan. Sharadka ugu caansan waa sharad on madow ama casaan. Sanduuqyadu waa madow ama casaan marka laga reebo hal sanduuq, oo ah cagaar. Taasi waa sanduuqa lambarka 0. Waxaad ku sharxi kartaa midab madow ama casaan, xittaa ama qariib ah, lambar keliya ama tiro isku dhafan. Haddii aad si sax ah u saadaalisay, waad guuleysanaysaa. Qaddarka guuleysigu wuxuu kuxiranyahay goobta lagu sharraxay. Miyaad sharad ku gashay casaan ama madow? Iyada oo saadaal wanaagsan, tani waxay keenaysaa hal mar oo sharad ah. Haddii aad leedahay hal lambar ingemarkaa tani dabcan waxay dhali doontaa faa iido aad u badan oo ah 35 jeer saamiga. Haddii aad raadineyso madadaalo roulette talooyin, markaa waxaad ka heli doontaa 10 halkan roulette talooyin.
Hadaad u tagto roulette berrinka ayaa ka hoos muuqda roulette giraangiraha markaa waxaad arki doontaa dhammaan lambarrada 0 illaa 36. Santuuqa madow iyo casaanka, xitaa iyo sanduuqyada aan caadiga ahayn sidoo kale waa goolal sharad oo gooni ah oo aad dhigatid jajab. Sanduuq kasta oo ku yaal sharadka ayaa bixiya fursad lagu dhejiyo jajab. Tani waxay suurtagal ku tahay hal lambar, laakiin sidoo kale tiro isku dhafan. Waxaa jira magacyo kala duwaningen loo isticmaalo khamaarista. Sidan ayaad ku dooran kartaa kala-bax. Kuwani waa laba lambar oo isku xidhan. Ama waddo aad ku sharraxdo seddex lambar oo isku xigta jiifa. Sharadka on afar afarta nambar waxaa loo yaqaan gees. Iyada oo baloog jiif ah oo ka kooban lix lambar, waxaa jira xariiq lixaad leh
Intaa waxaa dheer, waxaa jira tiir ka kooban 12 lambar oo aad ku sharxi karto taasna waxaa loo yaqaan 'column'. Waxa kale oo jira sanduuqyada 1aad, sanduuqyada 2aad iyo sanduuqa 3aad, halkaas oo aad ku sharadayso laba iyo tobanka lambar ee ugu horreeya, taxanaha labaad ee laba iyo toban lambar ama taxanaha saddexaad ee laba iyo toban lambar siday u kala horreeyaan. Sharadani waxay bixiyaan fursado badan. Iyada oo hal dhibic leh hal-ilaa-hal lacag bixin, waxaa sidoo kale jira xulashooyin sharad. Tusaale ahaan, lambarrada 1 illaa 18 ama 19 illaa 36. Dhammaan xitaa lambarrada, nambarrada kisi, dhammaan lambarrada casaanka iyo dhammaan lambarrada madow waxay mid mid u bixinayaan saadaal wanaagsan. Haddii aad sharad ku dhigto hal lambar, waxaa loogu yeeraa toosan.
Sharad ku dhigida hal lambar waxay bixisaa fursadda ugu yar ee lagu guuleysto. Fursaddu wey ka weyn tahay inaad saadaaliso in kubaddu madow ku dhammaanayso marka loo eego inay kubaddu ku dhammaan doonto lambarka 16igt. Waxaa jira si fudud sanduuqyo madow oo ka badan sanduuqyada lambar ee lambar 16. Waxaa jira mid keliya oo iyaga ka mid ah. Dabcan waa wax xiiso leh in lagu sharfo labadaba hal lambar iyo, tusaale ahaan, tiir, sidaa darteed waxaad isla markiiba leedahay lambarro taxane ah oo daboolan. Tani waxay isla markiiba kordhinaysaa fursadaha faa'iidada.
Roulette xeelad / tab
Een roulette istaraatiijiyaddu waxay kaa caawin kartaa inaad qaadatid koorsada saxda ah haddii aad rabto inaad u ciyaarto qaab nidaam gaar ah. Tani waxay ku siin kartaa hagitaan mana kuu oggolaaneyso inaad sameyso go'aanno kala duwan markastaingen qaado taas oo u rogi karta sax ama khalad. Istaraatijiyadda ugu caansan ee la xiriirta roulette waa la codsan karaa, waa Nidaamka Martingale. Tani waa hab aad u fudud oo ugu dambeyn faa'iido laga heli karo. Hadaad ku khasaarto roulette Nidaamkan ujeedku waa inuu labalaabo sharad wareega xiga. Miyaad kaliya ku ciyaartay 1 euro oo lagaa badiyay? Markaa waxaad labalaabaysaa sharadka ilaa 2 euro. Miyaad markale khasaaraysaa? Markaa markale ayaad labalaabaysaa.
Nidaamkani waa mid ku habboon in la isticmaalo marka aad ku sharraxayso casaan ama madow, ama ku dhejiso khafiif ama xitaa. In kasta oo saamiga bixinta macaashku yar tahay, haddana fursadda ugu dambaysa ee lagu guuleysto waa hubaal. Ilaa aad lumiso marar badan oo isku xigta oo aad gaadhay xadka miiska. Markaas si fudud uma sii wadan kartid labanlaab.
Mid kale ayaa jira roulette istiraatiijiyad lagu dabaqi karo waana taas taxanaha Fibonacci. Haddii lagaa badiyo wareega ciyaarta, marwalba waa inaad kudartaa labadii khamaaris ee hore. Waxaad markaa u isticmaali doontaa natiijada wadarta kuwan mar labaad wareega xiga. Markaad guuleysato, taas ma sameynaysid, laakiin waxaad dib ugu noqonaysaa laba tallaabo oo taxanaha ah, sidii ay ahayd. Haddii aad rabto inaad isticmaasho nidaam xitaa ka fudud, dooro Mid Hit Wonder. Ka dib waxaad u gudubtaa hal lambar oo aad rajeyneysaa in lambarku hoos u dhaco ka hor inta aan la ciyaarin 36 wareeg.
Roulette kala duwanaansho
ka roulette ciyaarta waxay leedahay dhowr nooc. Farqiga ugu weyn ayaa laga dhex samayn karaa Ameerikaanka roulette iyo Yurub / Faransiis roulette. Mareykanka roulette waxaa jira sanduuq leh 00 dheeraad ah. Khadka tooska ah ee internetka waxaad had iyo jeer fursad u leedahay inaad ka doorato dhowr nooc. Tani waxay sidoo kale suurtogal ka tahay casino-gacmeedka moobiilka ama khamaarka tooska ah, halkaas oo noocyada sidoo kale laga heli karo. Sidoo kale waa run in ay ku kala duwan yihiin halkii casino online ah sida ay u shaqeyso roulette ciyaarta ayaa loo qaabeeyey iyo waxa ay xadka sharadku yihiin. Taasi waxay kuxirantahay adeeg bixiyaha softiweerka casino. Bixiye caan ah oo bixiya tiro badan roulette noocyada la heli karo waa Netent.
Mareykan ah roulette
Mareykan ah roulette waa mid ka mid ah noocyada oo leh mid roulette wheel iyo sharad bet la qayb dheeraad ah. Taasi waa sanduuq cagaaran oo leh 00. Sababtoo ah waxaa jira sanduuq lambar oo dheeri ah, waxaa jira faa iido weyn oo guriga ah. Tani waxay ka dhigan tahay in xoogaa faa'iido yar ay u leedahay ciyaaryahanka, maxaa yeelay fursadda guushu way ka yar tahay iyadoo sanduuqa tirada lagu daro. Qaabka rouletteJadwalka sidoo kale waxyar wuu ka duwan yahay sababtoo ah saacadaha dheeriga ah ee 00. Haddii aad ku sharraxdo lambar keliya, fursadda guuleysiga waa boqolkiiba 2,63, oo ah 1 loo qaybiyay 38.
Yurub roulette waxaa lagu bixiyaa heer ahaan casinos-ka internetka waxaana sidoo kale lagu ciyaari karaa casinos-yada mobilada iyo qamaarka tooska ah. Faa'iidada gurigu way ka yara yar tahay nooca Maraykanka. Nooca yurubiyanku wuxuu leeyahay 37 jibbaarane oo ka bilaabma lambarka 0 ilaa lambarka 37. Si toos ah oo sharad ah oo aad sharad ugu dhigto hal lambar, waxaa jira fursad ah boqolkiiba 2,70, oo ah 1 loo qaybiyay 37. Fursada guushu way ka yara sarreeysaa yurub roulette.
Frans roulette wax badan kuma kala duwanaanshaha Yurubiyanka xagga naqshadeynta. Qaabkan, ciyaarta oo leh 37 laba jibbaaran ayaa sidoo kale la ciyaaraa sidaas darteedna waxaa jira kaliya hal barxad cagaaran oo leh 0 Faransiis ah roulette ciyaarta, si kastaba ha noqotee, waxaa jira laba sharci oo dheeri ah. Kuwani waa qayb qeyb iyo xabsi. La qaybinta qaybta waxaa jira faa iido dheeri ah oo ciyaaryahanka ah, maxaa yeelay luminta ayaa lagu xadidi karaa xulashadan.
Si kastaba ha noqotee, tani waxay khuseysaa oo keliya haddii kubaddu aakhirka ku degto 0 square iyo haddii ay jiraan 50-50 sharad oo ku saabsan casaan, madow, xitaa iyo wax aan caadi ahayn. Qaanuunka qaybta kala qaybinta, qamaarka noocan oo kale ah haddii kubbadu ku dhacdo 0, kala badh sharadku waa lumeen. Haddii sharcigan qaaska ahi aanu khuseyn, sida noocyada kale, ciyaaryahanka ayaa luminaya sharad dhan. Khamaarka guriga ee casino wuxuu hoos u dhigay boqolkiiba 1,35 xeerkan.
En xabsi waa sharci kale. Hadday xaaladdan oo kale dhacdo isku mid ah la socoto natiijo 0 ah iyo sharad casaan, madow, xitaa ama qariib ah, markaa fursadda waxaa la siiyaa inay ka tagto kala bar sharadka. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad dib u hesho kala badh sharadkii. Chips-ka iyo xabsiga ayaa wali ku xayiran. Wareegga xiga ee ciyaarta waxaad dib u heli kartaa jajabyada haddii aad guuleysato.
Gawaarida badan roulette
Oo leh giraangiro badan roulette waxaa jira nooc ka duwan gabi ahaanba. Waxaad markaa ku ciyaari doontaa a roulettemiis leh dhowr roulette giraangiraha. Waxaad dhigtaa sharadkaaga ka dibna waxaad sameysaa dhowr roulette giraangiraha fursad ay ku guuleystaan ​​lacag. Badanaa gawaarida badan roulette oo lagu bixiyo noocyada yurub ee leh 37 qaybood. Way tagaysaa iyada oo aan la odhan mid kasta roulette wheel kulankaan waxaa laga yaabaa inay muujiso natiijo ka duwan. Taasi waa sida saxda ah xiisaha, soo jiidashada iyo xiisaha leh midkaan roulette duwanaansho.
Si aan wax yar fikrad kaaga siiyo. Haddii aad isticmaasho gawaarida badan roulette marka aad ciyaarta bilowdo, waxaad arki doontaa hal goob oo sharad ah iyo dusheeda kuwa kala duwan ayaa lasoo bandhigi doonaa roulette giraangiraha la soo bandhigay. Haddii aad jeceshahay inaad faafiso fursadahaaga, xulashada noocani waa hubaal ikhtiyaar. Waxaad dooranaysaa qadarka sharadka iyada oo ku saleysan jajabyada laga heli karo miiska ciyaarta. Waxaad ku guuleysan kartaa lacag badan si dhakhso leh, laakiin maskaxda ku hay in guuldarradu ay sidoo kale suurtagal tahay.
In ka badan Roulette
Midkani Roulette dib u eegista waxaa qoray Nicky waxaana markii ugu dambeysay la baaray 05-02-2021.